Redmi Rịba ama 7: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 7: Xiaomi ekwentị ọhụụ
Na mbido ọnwa, ekwenyesiri ya ike na Xiaomi ga-eweta ụdị ọhụụ n'ime mpaghara Redmi Jenụwarị 10. E kwupụtakwara na Redmi na-aghọ akara aka nọọrọ onwe ya, nke mere na akara ndị China na-achọ imeri mpaghara ahịa a. N’ikpeazụ ụbọchị ahụ abịala ma anyị amatala ekwentị ọhụrụ, nke mbụ n’ime ụdị ahụ. Ọ bụ ihe gbasara Redmi Rịba 7 ama. Ngwaọrụ na-apụta maka ịbụ nke zuru oke yana na ọnụ ala dị ala.
Nke a Redmi Rịba ama 7 abịarute dị ka onye nke kasị mma uru maka ego igwe Site na ahịa. Yabụ na ọ ga - abụrịrị nnukwu ihe ịga nke ọma maka ụdị Xiaomi ọhụrụ a. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ a?
Xiaomi agbanweela akara ahụ, mana ọ na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'otu ụkpụrụ dị na ekwentị ndị a. Ọ na-apụ apụ karịsịa maka kamera azụ ya, ọ na-egosipụtakwa ihuenyo na nnukwu nguzogide ma ọ na-abịa na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ, yabụ ejiji na gam akporo taa Ezigbo.
1 Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7
2 Igwefoto dị ka ebe siri ike
Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7
Banyere imewe, anyị nwere ike ịhụ na nke a Redmi Rịba ama 7 na-agbaso usoro ahịa na gam akporo. Bet nzọ na a ihuenyo na ọkwa na ọdịdị nke a dobe mmiri. Ya mere eji eji ngwaọrụ a otutu n'ihu igwe a. Na azụ anyị nwere igwefoto abụọ, nke na-ekwe nkwa ijuanya. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Mbido nke ụdị ahụ na-ahapụ anyị na atụmatụ nke anyị na-ahụ ọtụtụ na ahịa, dịka anyị gwara gị, na ọkwa a n'ụdị ndapụ mmiri. Ọ dị ka ezigbo imewe, ebe agba na-apụta na azụ. Ebe ọ bụ na akara ndị China na-esonyere omume nke gradients, nke ewepụtara na afọ gara aga na njedebe nke Huawei.
Ekwesịrị ikwu na Redmi Rịba ama 7 na-ewetara anyị nkọwa ndị anyị na-ahụbeghị na ekwentị nke nso a. Nke a bụ ihe dị iche iche na-ahapụkarị anyị ụdị dị ala ma ọ bụ dị ala. N'okwu a, maka mmalite ya dị ka akara aka nwere onwe ha, ha hapụrụ anyị Redmi kachasị mma nke emegoro. Ebe dị n'etiti nwere ezi nkọwa, nnukwu ihuenyo, ezigbo nhazi, nchikota dị iche iche nke RAM na nchekwa, igwefoto dị mma, na nnukwu batrị.
Igwefoto dị ka ebe siri ike
Igwefoto bụ otu n'ime akụkụ ndị na-adọta uche kachasị na nke a Redmi Rịba ama 7. Ebe ọ bụ na azụ na-abịa na a 48 + 5 MP igwefoto abụọ nwere oghere f / 1.6. Ya mere, nke bụ eziokwu bụ na a na-atụ anya ọtụtụ ihe igwefoto ndị a na ngwaọrụ dị n'etiti. Ajụjụ bụ ma ha ga-atụ ihe. Mana ịtụle na anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị nwere 48 MP n'izu ndị a, foto kwesịrị ịdị mma.
Na ọkwa ọkwa ọnụahịa, akara ndị China na-egosiworị igwefoto ngwaọrụ ahụ. O yiri ka igwefoto azụ ga-enye anyị mkpebi dị elu na arụmọrụ dị mma na obere ọkụ. Ọzọkwa, echefula nke ahụ anyị nwere ọgụgụ isi nke na - eme ka igwe foto ndị a dị mma, maka ịrụ ọrụ ka mma.
Ekwuwaala ọkwa Redmi Note 7 a na China, naanị ahịa nke gosipụtara nkwalite ya ugbu a. Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na anyị ga-ahụkwa ekwentị na Europe. Mana mgbe nke a ga-eme bụ ihe anyị na-amaghị n’oge a. A na-atụ anya na ọ ga-abata n'ụdị dị iche iche, dị ka acha anụnụ anụnụ, ojii, ma ọ bụ pink.
. Ihe anyị maara bụ ọnụahịa nke ekwentị na mmalite ya na China:
Nlereanya na 3 + 32 GB: Ahịa nke 999 yuan (ihe dị ka euro 130 iji gbanwee)
Dị nke 4 + 64GB: 1199 yuan nke ọnụahịa (ihe dị ka euro 150 iji gbanwee)
Nlereanya na 6 + 64 GB: Ahịa nke 1399 yuan (ihe dị ka euro 180 iji gbanwee)
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela na ha na-arụ ọrụ na Redmi Note 7 Pro, nke ga-abịa na igwefoto MPN 48. Anyị amaghị ihe ọ bụla ugbu a banyere mmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi Rịba ama 7: Xiaomi ekwentị ọhụụ
Run Gun Die bụ ihe isometric n'ọnọdụ shooter nke ị hụrụ onye gị